असोजसम्म एक तिहाइ नेपालीलाई खोप - Aarthik Sanjal
काठमाडौँ । केही साता अघिसम्म कोरोनाविरुद्ध खोपको अभाव चर्को थियो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि रकम बुझाई खरिद गरिएको खोप पनि आउन सकेन । खोप उत्पादक मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि नेपालजस्ता मुलुकका लागि खोपमा सहज पहुँच जटिल बन्यो तर अब भने खोप सहज बन्दै गएको छ ।
मित्रराष्ट्रबाट सहयोग, कोभ्याक्स सुविधा र खरिदमार्फत धमाधम खोप आउन थालेको छ । समग्रमा ६५ लाख मात्राभन्दा बढी खोप स्वदेश आइसकेको छ । थप खोपसमेत आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालीलाई अब खोपको अभाव नहुने बरु प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हालसम्म नेपालमा ६५ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
भारतले पनि सुरुमा १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा सहयोग गरेको थियो । भारतसँग सरकारले छुट्टै २० लाख मात्रा खोप गरिद गरेकोमा १० लाख मात्रा आइसकेको छ । बाँकी १० लाख मात्रा खोप आउन बाँकी छ । त्यहाँ कोरोनोको दोस्रो लहरले दिनमै साढे चार लाखसम्म मानिस सङ्क्रमित हुन थालेपछि अदालतले निर्यातमा रोक लगाएको थियो ।
तथापि त्यसबीचमा भारतबाटै कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत तीन लाख ४८ हजार मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३ गते । केही साता अघिसम्म कोरोनाविरुद्ध खोपको अभाव चर्को थियो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि रकम बुझाई खरिद गरिएको खोप पनि आउन सकेन । खोप उत्पादक मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि नेपालजस्ता मुलुकका लागि खोपमा सहज पहुँच जटिल बन्यो तर अब भने खोप सहज बन्दै गएको छ ।
मित्रराष्ट्रबाट सहयोग, कोभ्याक्स सुविधा र खरिदमार्फत धमाधम खोप आउन थालेको छ ।
समग्रमा ६५ लाख मात्राभन्दा बढी खोप स्वदेश आइसकेको छ । थप खोप समेत आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालीलाई अब खोपको अभाव नहुने बरु प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हालसम्म नेपालमा ६५ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा केही दिनभित्रै ६४ लाख मात्रा खोप आउने जानकारी दिँदै उहाँले चीनसँग खरिद गरिएको ३२ लाख तत्काल आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले भेटेर चीनले थप १६ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने जानकारी गराउनुभयो । यो खोप नेपालले खरिद गरेभन्दा बाहेकको हो ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब जापानबाट थप १६ लाख मात्रा खोप आउँदै छ । यो खोप कोभ्याक्स सुविधाभन्दा छुट्टै रहेको बुझाइ छ । जापानबाट आउने खोप पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाएका १४ लाख वृद्धलाई दोस्रो डोज लगाउन मिल्ने भएकाले त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गरिने छ ।
नेपाललाई प्रारम्भमै भारतले १० लाख र चीनले १८ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिइसकेको छ । चीनले सुरुमा आठ लाख मात्रा र दोस्रो पटक थप १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा सहयोग गरेको थियो ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार खोप खरिदअन्तर्गत नेपालले हालसम्म भारतबाट १० लाख र चीनबाट आठ लाख गरेर १८ लाख मात्रा खोप ल्याइसकेको छ । चीनसँग खरिद गरेको बाँकी ३२ लाख मात्रा खोप आउन बाँकी छ भने भारतसँग खरिद गरेको १० लाख मात्रा खोप आएको छैन । चीनसँंग खरिद गरेको खोप लिन साउन ६, ७, ८ र ९ गते नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदै छ । चार पटक गरेर ३२ लाख मात्रा खोप नेपाल आउन लागेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
३ साउन २०७८, आइतवार ०६:१८ बजे प्रकाशित
आइतबार २ बजे काँग्रेस संसदीय दलको बैठक